Boqolaal Hablo Heerin Ah Oo Reer Yurub Iyo Yuhuud Ah Oo Ku Biiray Kooxda Dacish (ISIS) | Hawraar
October 19, 2014 Xiisaha/Xulashada No comments
Boqolaal Hablo Heerin Ah Oo Reer Yurub Iyo Yuhuud Ah Oo Ku Biiray Kooxda Dacish (ISIS)
Kooxda loogu hadal haynta badan yahay dunida ee Dacish (ISIS), ayaa la sheegay in labadii bilood ee ugu danbeeyay ay ku biireen, boqolaal hablo gashaantimo ah oo heerin ah, kuwaas oo ugu boqolay waddamada Yurub, waxaana dumarkan guur doonka ugu kicitimay bariga dhexe ka mid ah hablo Yuhuud ah.
Sida ay ku warantay jariirada ugu afka dheer dalka Israel ee Yadiot Ahronot, waxa dalka Faransiiska oo kaliya sadexdii bilood ee ugu danbeeyay ka tagay ilaa labo boqol oo hablo ah, kuwaas oo si rasmi ah ugu biiray, kooxda Dacish (ISIS), waxaanay dumarkaasi ka gudbeen xuduudaha Ciraaq iyo Suuriya la wadaago, waddamada Urdun iyo Turkey.
Jariirada oo waraysi la yeelatay masuul sare oo ka tirsan sirdoonka dalka Faransiiska, ayaa ku warantay, walaac aad u wayn oo sida ay sheegtay xukuumada Faransiisku ka qabto, dumarka tirada badan ee ku biiraya, kooxda Dacish, kuwaas oo sidii la filayay aad uga tiro badan.
Masuulkan oo ka hadlayay, sababta keentay in boqolaal hablood ku biiraan, kooxdan dunidu la dagaalamayso, waxa uu yidhi, “Ma Garan karno sababta, waligeedna hore umay dhicin, dumar u hayaama dagaal yahano si caalami ah loola dagaalamayo, laakiin waxa aad moodaa, in kooxdani sida sixirka oo kale cid walba u dar dareen, dumarku haba ugu sii darnaadaane.”
Jariirada Yediot Ahronot, ee dalka Israel ka soo baxda ee warkan daabacday, ayaa sidoo kale soo bandhigtay, tobanaan sawir oo jaaliyadaha Yuhuuda ee dalalka Reer Yurub u soo direen, kuwaas oo muujinayaa, hablo Yuhuud ah oo Heerin ahaan ugu tagay kooxda Dacish, kana mid noqday, safafkooda dagaal yahanada, kuwaas oo ay ku jiraan dhakhaatiir iyo gabadho aqoon yahano ah.
Laakiin dhamaantood door biday inay ku biiraan, kooxdan, waxaanay jariiradu sheegtay in dhacdadani noqonayso tii ugu horaysay nooceeda, ee Dumar Yuhuud ahi ku biiraan, kooxo dagaal Yahano Islaamiyiin ah, tan iyo intii ka danbaysay markii dawlada Israel la taagay sanadkii 1948-kii.
Tirada hablaha ku biiray kooxda dacish ee waddamada Reer Yurub ayaa marka la isku geeyo lagu qiyaasayaa ilaa kun iyo shan boqol oo dumar ah, kuwaas oo ka wada tagay, waddamo si wayn looga tix geliyo, xuquuqda haweenka sida ay ku doodayaan khubarada reer galbeedku, laakiin lama garanayo sababta ku kaliftay inay u badheedhaan halista ka jirta gobolka bariga dhexe.
Hablahan Guur doonka ah ee Kooxda Dacish ku biiray, ayaa shabakadaha xidhiidhka bulshada internet-ka soo geliyay sawiro muujinaya is badalkooda, sida iyagoo xijaaban iyagoo qoryo sita oo u hanjabaya Obama iyo waddamada reer galbeedka iyo sawiro kale oo muujinaya inay qaateen diinta Islaamka, gaar ahaan kuwoodi hore u ahaan jiray, Yuhuuda iyo Reer Yurubka sida warbaahinta Israel iyo reer galbeedku ku warantay.